Niebla, akara agaghị emebi emebi nke Unamuno n'ime ịdị adị adị | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Niebla, nke Miguel de Unamuno dere
Fog (1914), nke onye edemede Bilbao bụ Miguel de Unamuno, bụ ihe dị mkpa n'ime ntụnye aka nke akwụkwọ akụkọ dị adị nke oge a. N'ezie, mgbe ị na-enyocha ụdị njirimara nke ọrụ a, ọ dị mkpa ịchọpụta atụmatụ nke ụdị ọhụrụ nke Unamuno ji malite. Fog.
Ọ bụ «nívola», akụkọ nke etinyere site na monologues na-agaghị ekwe omume nke ndị protagonists. N'ime mkparịta ụka ndị ahụ, a kọwara ha site n'echiche nke nkịta na nkwukọrịta nke onye isi agwa na onye okike ya. Ọzọkwa, ihe ejizi okwu edetu na ihe ndi ozo, mee Fog ezi edemede ederede bara nnukwu uru.
1.2 Njirimara nke ọrụ ya
1.2.1 Ihe nketa
2 Nyocha na nchịkọta nke Niebla
2.4 Mkpughe ahụ
Miguel de Unamuno hụrụ ìhè na nke mbụ ya na Bilbao, Spain, na Septemba 29, 1864. N'oge ọ bụ nwata, ọ hụrụ nkatọ obi ike nke agha Carlist. N’afọ ndị 1880, ọ gụchara akara ugo mmụta na-agụsị ihe na akwụkwọ ozi na Mahadum Madrid. Ọrụ ndị mbụ ya bụ dịka onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị (ọ kụziri Latin na akparamaagwa), mana isi ebumnuche ya bụ inweta oche oche mahadum.
Mgbe ọ gbalịsịrị ọtụtụ mbọ, na 1891, a họpụtara ya Prọfesọ nke Greek na Mahadum Salamanca (Na obodo ahụ ọ dịrị ndụ oge niile nke ndụ ya). Na 1901, ọ ghọrọ onye nlekọta nke ụlọ akwụkwọ ahụ (nke mbụ n'ime okwu atọ dị ogologo). Nkwụsịtụ kachasị dị na ọrụ mahadum ya mere n'oge ọchịchị aka ike nke Primo Rivera (1924 - 1930), mgbe ọ gara biri na France.
O doro anya na esemokwu nke Unamuno pụtara ìhè mgbe ọ hụrụ mgbanwe ya na mgbakwunye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nsogbu nke mmụọ ya, na ọrụ nke ya. N'ezie, Ọ bụ nwoke na-ahụkarị onwe ya n'anya, na-echekwa esemokwu n'onwe ya. Ya mere, ịlụ agha ya na PSOE ma ọ bụ ọmịiko ya maka echiche ndị na-elekọta mmadụ n'oge ọ bụ nwata abụghị ihe ijuanya.
Ka oge na-aga, ọ gbadoro ụkwụ n'ọchịchọ ndị na-achọghị mgbanwe, na-abịa nwee ọmịiko maka ọchịchị Franco n'agbanyeghị na a hoputara ya dị ka onye osote onye n'oge Republic. Ọ bụ ezie na mgbe ọ na-erule ọgwụgwụ nke ndụ ya, ọ hapụrụ ọnọdụ a. N'ihi ya, Ọ nwụrụ na mkpụmkpụ n'ụlọ ya na Disemba 31, 1936. Izu ole na ole tupu ọnwụ ya, o kwuru otu n’ime ahịrịokwu ama ama ya n’ihu igwe mmadụ:
"Will ga-emeri mana ị gaghị ekwenye."
Njirimara nke ọrụ ya
Uzo na mkpa nke ihe okike Unamuno di ka ndi ozo ndi ozo di na XNUMX Spanish. N'otu ụzọ ahụ, Ọ bụ onye edemede na-aga nke ọma na ụdị niile: prose, poke, edemede, dramaturgy ... N'aka nke ọzọ, ọ bụ akụkọ ihe mere eme nke onye Spain a nọ n'ọgbọ nke 98.
Nkwupụta nke Miguel de Unamuno kwuru.
Miguel de Unamuno bụ onye na-echekarị gbasara akụkọ ihe mere eme, akwụkwọ, omume ọjọọ, ugbu a na ọdịnihu nke Spain. N'otu aka ahụ, ọ kwadoro ihu ọma mmụọ nke mba nke na-achọkarị iche echiche. N'ime nzụlite ọgụgụ isi ya ọ gbanwere azịza ya na "Europeanize Spain" site na "Spanishize Europe".
Akụkụ ọzọ na-emetụ n'ahụ na ọrụ ya bụ uche ya na nhụjuanya na nsogbu nke mmadụ. Ya mere, onye edemede Bilbao kọwara arụmụka gbara ọkpụrụkpụ gbasara nsogbu dị adị dị adị ebighi ebi n'etiti ọnọdụ zuru oke nke mmadụ. Nakwa mmekọrịta ya na Chineke na anwụghị anwụ nke mkpụrụ obi ma ọ bụ echiche.
Usoro okike nke Unamuno na ozi ndi ezigara na iberibe ya na-egosiputa ezi obi ya. Ọrụ ya bụ ngwakọta zuru oke nke njiri ike siri ike na ịdị ndụ gosipụtara site na okwu ọhụụ., pụọ n'ụzọ oge ochie. Na mgbakwunye, onye edemede Basque bịara ichepụta okwu ọhụrụ iji tinye echiche njupụta na ike na mmetụta uche.
Nyocha na nchịkọta nke Fog
Nwere ike ịzụta akwụkwọ ebe a: Fog
Akwụkwọ akụkọ ahụ na-akọ banyere ọnọdụ nke Augusto Pérez, onye ọgaranya na-eto eto bara ọgaranya nke nne ya nwụrụ. N'ịbụ onye nanị nwa, onye ahụ na-atụ ụjọ na-enwe nkụda mmụọ banyere ịdị adị ya. Nzaghachi ya na ọnọdụ ọ bụla bụ - nke e chere na ọ bụ echiche nke mmụọ, mana, ịkọ eziokwu, mkpebi ya na-abụkarị nke mkpali, obere elebara anya.
N’agbanyeghi na o nwere ezigbo agwa, o na-eme omume ara ure. N'ihi ya, Augusto "hapụrụ onwe ya" kama ịchịkwa ndụ ya. N'ihi nke a, enweghị ike ịchọpụta na / ma ọ bụ chee mmetụta ha ihu mgbe ha bilitere, karịsịa, mgbe onye ọkpọ ọkpọ mara mma jụrụ, Eugenia Domingo del Arco.
Na nke mbụ, nwa agbọghọ a na-agba alụkwaghịm na-ekwu na ya nwere enyi nwoke, Mauricio. Otú ọ dị, mgbe Augusto malitere mmekọrịta ịhụnanya na Rosario Otu n'ime ụmụ ada ya— ọ (na-enyo) na-ahọrọ ikewa na onye ya na ya bi. Mgbe ahụ, Rosario kwenyere na ya ga-ekwe onwe ya nkwa Augusto ma wepụta ụbọchị maka agbamakwụkwọ n'ọdịnihu.
Kaosinadị, obere oge tupu alụmdi na nwunye ahụ, Eugenia gwara ya akwụkwọ ozi na Augusto na ọ gaghị abụ nwunye ya. Kama, o kpebiri iso Mauricio laghachi ma soro ya gaa mpaghara ahụ. Ọzọkwa, n’akwụkwọ ozi ahụ nwa agbọghọ ahụ na-akọwa atụmatụ ya ịkwado onwe ya n’itinye ọrụ ọkaiwu ahụ chọtara maka Mauricio (onye umengwụ) yana n’ụlọ nke Augusto kwụụrụ ego.
N'ụzọ dị otú a, echiche nke nwanyị mara mma ma na-alụ ọgụ na Augusto (na onye na-agụ ya) akwụsịla mgbe ọdịdị ya na-adịghị mma. Na otu, Àgwà Eugenia dị ka onye ụgha, na-akpụ akpụ, na-eche echiche ma na-erite uru pụtara ìhè. N'ịbụ onye aghụghọ a chere, ụzọ ọpụpụ onye isi bụ igbu onwe ya.
Dị ka ihe ikpeazụ tupu igbu onwe ya, onye protagonist ahụ kpebiri ịga Salamanca iji gaa Unamuno. Ya na onye edemede ahụ, ọ na - etinye aka na mkparịta ụka epic, ebe Don Miguel tinyere Chineke na Augusto na - anọchite anya ihe okike. N'oge a, mkpughe na-efu na-egosi n'akụkụ Unamuno - Onye Okike: Augusto Pérez abụghị ezigbo. Onye ọka iwu bụ akụkọ ifo na akara aka akara aka, na-abụghị ịnwụ site na igbu onwe ya.
N'ikpeazụ, Augusto na-emegide Unamuno ma kwuo na ọ dị adị. Ihe bụ ihe ọzọ, Ọ na-echetara ya ọnọdụ ịnwụ anwụ nke mmadụ niile (gụnyere Don Miguel, ndị na-agụ akwụkwọ na ya onwe ya). Nkwupụta a hapụrụ onye edemede ahụ ntakịrị iwe, onye lara ezumike nká ezumike n'ụlọ ... Mgbe ọ na-ehi ụra, Chineke kwụsịrị ịrọ nrọ nke Augustus, n'ihi ya, onye protagonist "dara", ya bụ, ọ nwụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » ụdịdị » Novela » Niebla, nke Miguel de Unamuno dere
Fernando Lillo. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke A day in Pompeii
Francisco Brines. Ntuziaka Cervantes 2020. Somefọdụ poems